Momba anay - Chapman Technology Co., Ltd.
Tongasoa eto Chapman Maker orinasa, Niorina tamin'ny 2008. Manana fanamarinana SGS sy rafitra fitantanana kalitao ISO 9001 izahay.
Saha bobongolo, Chapman Maker dia manam-pahaizana manokana amin'ny famolavolana sy famokarana karazana lasitra plastika amin'ny alàlan'ny HASCO, DME, LKM, MISUMI miaraka amin'ny famakafakana mikoriana. Manome DFM ho an'ny mpanjifa izahay ao anatin'ny 2 andro ho an'ny fananganana bobongolo miaraka amin'ny fahombiazana avo lenta. Manolotra kalitao tsara sy serivisy tsara indrindra ho an'ny mpanjifa manara-maso izahay miaraka amin'ny tatitra isan-kerinandro momba ny fizotran'ny famokarana.
Sehatra fampivoarana ny vokatra, Ndao hataontsika vokatra azo tsapain-tanana sy azo hamidy ny hevitrao. Izahay dia maniry hamaha ny olana amin'ny alàlan'ny fandinihana lalina sy ny famolavolana eritreritra. Miaraka amin'ny injeniera, famolavolana, fandaharana ary famokarana ao an-trano, tsy misy zavatra tsy haintsika atao.
Chapman Makermanana herin-tsoavaly ilaina hamita ny tetik'asa amin'ny fandaharam-potoana, ny fahaiza-manao napetraka hikarakarana ny fizotran'ny fampandrosoana ilaina araka izay ilaina, ary ny fanavaozana hahitana vahaolana amin'ireo olana mafy indrindra. Amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ny famolavolana sy ny injeniera dia maka hevitra lavitra kokoa izahay, haingana kokoa, manome ny mpanjifantsika tarehin-mpanjifa, endrika mpamokatra eo ambanin'ny fandaharam-potoana tery.
Ny fisainantsika sary lehibe dia mitazona ny tanjonao ho lohany sy ho afovoany. Manampy ny mpanjifanay izahay amin'ny famolavolana sy amin'ny fanandramana traikefa an-tsena izay manatsara ny marika sy mihoatra ny filan'ny mpanjifa. Ny fifanakalozana dia natao hanan-kery amin'ny sehatra ara-batana sy ara-pihetseham-po ary fanamafisana ny fampanantenan'ny mpanjifanay. Ny tanjonay dia ny tanjon'ny mpanjifanay farany. Na tanjona kendrena, tanjon'ny marika, na tanjona fandaharam-potoana dia miara-miasa amin'ny mpanjifanay izahay hahatratrarana azy ireo.
Manome serivisy tokana ho an'ny mpanjifa izahay amin'ny alàlan'ny fanavaozana, ny famolavolana, ny injeniera, ny famokarana ary ny fahaiza-mitantana kalitao ary ny vidin'ny fifaninanana.
"Mamorona lanja ho an'ny mpanjifa ary manao azy ho tonga lafatra" no filozofianay. Hahatsapa tombony bebe kokoa ianao amin'ny fiaraha-miasa Chapman Maker!